ဂျိမ်းမ်စ် အမ်အမ်တီ ရှင်မင်းယာ (James Mmt Qing Minya) တို့လို လေလှိုင်းကနေ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတဲ့သူတွေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« နော်လွီဇာဘင်ဆင် (၀ါ) ကရင်အမျိုးသားတို့ ရဲ့ငွေကြယ်တပွင့်
A Lesson from the Past: the fate of the Karen Revolutionary Council »
ဂျိမ်းမ်စ် အမ်အမ်တီ ရှင်မင်းယာ (James Mmt Qing Minya) တို့လို လေလှိုင်းကနေ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတဲ့သူတွေ
မောင်မောင်(ရွှေကရဝိက်)ဆိုတဲ့ကလောင်အမည်နဲ့ စာအုပ်ကလေး တအုပ်(တစ်အုပ်တိတိ) ရေးသားဘူးပါတယ်….
မြန်မာပြည်မှာနေစဉ်က မန္တလေးမြို့မှာ..ရွှေကရဝိက်ကဖေး…ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းခဲ့ပါတယ်….
ငယ်စဉ်ကထဲက လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို…စိတ်ပါဝင်စားလို့…မန္တလေးမှာ… လူအချို့က…သိကြပါတယ်…
မန္တလေးသား…ဈေးသည်…ဖြစ်တဲ့အတွက်…မန္တလေးက…ဗုဒ္ဓဘာသာမိတ်ဆွေ များနဲ့ရော…ရဟန်းသံဃာများနဲ့ပါ …ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေး…ရှိပါတယ်…
ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာတော့…ကျွန်တော့်အကြောင်း…တော်တော်လေး..ပြည့်ပြည့် စုံစုံ…ရေးထားမိပါတယ်…စာအုပ်ဟာ …ကျွန်တော့်ရဲ့…ခရီးသွားမှတ်တမ်း…ဖြစ်လို့ပါပဲ..
.ပြသနာများ မဖြစ်ပွားရေးအတွက်…ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ …မရောက်လာမှီ…မလေးရှားမှာ…ပြသနာများစတင်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ကထဲက…မလေးရှားနိုင်ငံက…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အကြား..မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း…ပြေလည်မှုရရှိစေရေးအတွက်…ဆက်သွယ်…ကြိုးစားခဲ့ဘူးပါတယ်….
အခြေအနေ…အကြောင်းအရာတခုကြောင့်…မြန်မာပြည်က…မိသားစုရဲ့…လုံခြုံရေး…အနာဂတ်အရေးတို့အတွက် …ထွက်ခွာလာခဲ့ရပေမဲ့….ကျွန်တော်ဟာ…မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်ပါ…
လက်ရှိ…စစ်အစိုးရနှင့်…အပေါင်းပါများရဲ့…မြန်မာနိုင်ငံကို…အလုံးစုံပျက်သုန်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို…မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့…ဆန့်ကျင် တွန်းလှန်…တိုက်ခိုက်သွားမှာ…ဖြစ်ပါတယ်…
လက်ရှိအချိန်မှာ…မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို …အဆုံးစွန် သောအခြေအနေအထိ…ဘာသာရေးအရ…တိုက်ခိုက်…စော်ကား…သတ်ဖြတ်မှုများရှိ နေသော်လည်း….အဆိုပါလုပ်ရပ်များဟာ…အရေခွံလဲ…စစ်အစိုးရနဲ့…သူ့ရဲ့လက်ပါးစေ…လူနဲ့ သံဃာအချို့ရဲ့ လုပ်ရပ်လို့…ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်…
အကြောင်း ကြောင်းတွေကြောင့်…စာနာမှုပြသခြင်း…ကန့်ကွက်မှုမပြုကြခြင်း…ထင်ရောင်ထင်မှားဖြင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအပေါ်မကောင်းမြင်နေကြခြင်းများ …ရှိနေကြ သော်လည်း….မြန်မာနိုင်ငံသား…လူများစုမှာ…အေးချမ်းစွာနေထိုင် လိုကြ ပြီး …တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို…လိုလားကြသည်ဟု…ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်…
လက်ရှိ…အလွန်ဆိုးဝါးနေသော…အခြေအနေများ…မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ..အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ…ခံစားနေရသည့်အချိန် တွင်ပင်လျှင်…အမျိုးသား…ရင်ကြားစေ့ရေးကို မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည်ဟု…ကျွန်တော်…ယုံကြည်ပါတယ်…
Facebook ပေါ်မှာ…မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံစွတ်စွဲ…ပြောဆိုနေကြတာတွေဟာ..အခြေအမြစ်မရှိတဲ့စကားတွေ…စွတ်စွဲချက်တွေ ဆိုတာ…အများသိပါတယ်…
ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြီး…အမျိုးသားရေးလုပ်နေသူတွေဟာ…ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစား ကိုယ့်ငွေကိုစိုက်ထုတ်သုံးစွဲ…လူပန်း…စိတ်ပန်းခံပြီး…လူမှုရေး..လုပ်နေတဲ့.. .မြင့်မြတ် တဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေပါ…
အခု…မဟုတ်မမှန်တာတွေရေးတင်နေတဲ့..ဂျိမ်းမ်စ် အမ်အမ်တီ တို့လို…ရှင်မင်းယာတို့လို…မိမစစ်…ဖမစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး…လေလှိုင်းကနေ ဘာသာရေး…လူမျိုးရေး..ပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်…လှုံ့ဆော်နေတဲ့သူတွေ…မဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့…စိတ်စေတနာ…ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို…သိလိုတာရှိရင်… မရှင်းလင်းတာရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း…လာမေးလို့ရပါတယ်…
This entry was posted on November 20, 2013 at 9:50 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.